नयाँ वर्षको शुभकामना ! – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७१ बैशाख ८, सोमबार ०१:५४ गते
२०७० साल हाम्रा सामुबाट बिदा भएर २०७१ साल अहिले भित्रिसकेको छ । नयाँ साल आउँदै गर्दा धेरैका मोबाइल र फेसबुकका वालहरु शुभकामनाका सन्देशहरुले भरिएका थिए । एउटा वर्ष सकिएर अर्को वर्ष आउँदै गर्र्दा १२ महिना मात्र कटेको हुँदैन, यसले धेरै नै राम्रा र नराम्रा प्रभावहरु छाडेर गएको हुन्छ । कसैलाई यही साल फलिफाप सिद्ध हुन्छ भने कसैलाई यही साल अफापसिद्ध भएको हुन्छ । कसैले मंगलमय शुभकामना भन्दैमा शुभ हुने होइन । वर्षभरिको अवधि मंगल बनाउने वा नबनाउने त्यो स्वयं आफैँमा भर पर्ने कुरा हो । नयाँ वर्षका ३६५ दिनहरु बित्दै गर्दा कति मेहनत वा लगनशीलतापूर्वक काम ग¥यो, त्यसमा नै कामको सफलता वा असफलता भर पर्ने कुरा हो । नयाँ वर्षको पहिलो दिन मीठो खाएमा वा राम्रो ठाउँ घुमेमा वर्षभरको अवधि पनि त्यसरी नै बित्छ भन्ने मान्यताका साथ आजभोलि हामी नयाँ वर्ष मनाउने होडमा जुटिरहेका हुन्छौँ । वर्षको पहिलो एक दिनलाई मात्र मान्यता दिने अनि बाँकी दिन त्यसै–त्यसै बिताउने परिपाटीमा सुधार नगर्नेहरुका सबै नयाँ वर्षपछिका दिनहरु असफलतामा नै बित्ने निश्चित छ ।
वर्षको पहिलो दिन गरेको कामको सम्झना सधैँ परिरहने हुँदा पनि वर्षको पहिलो दिन मीठो खाने, राम्रो लगाउने वा शुभ कार्यको थालनी गर्न राम्रो मानिन्छ । तैपनि, हरेक दिनहरुले पनि नयाँ वर्षले जत्तिकै मह¤व पाउँदा व्यक्तिको विकासमा तीव्रता आउँछ । प्रत्येक महिना, दिन वा वर्ष आफैँमा प्रत्येकको ठूलो मह¤व छ । तैपनि, हामी नयाँ वर्षमा जुन जोश, जाँगर र उत्साहका साथ काम गरिरहेका हुन्छौँ, समय बित्दै जाँदा जोश र जाँगरमा पनि कमी ल्याइरहेका हुन्छौँ ।
अघिल्ला धेरै वर्षदेखि हामीले नयाँ वर्ष मनाउँदै आइरहेका छौँ र पनि हामी–हामीमध्ये धेरैले वर्षमा एउटै नराम्रो बानीसमेत छाड्न सकेका छैनौँ । हामी नयाँ वर्ष मनाउनका लागि विभिन्न ठाउँ जाने र शुभकामना बाँड्ने कामका लागि दस–एघार वर्षको उमेरदेखि नै योग्य भएको ठान्छौँ । अब हिसाब गरौँै त, दस वर्षदेखि नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा एउटा मात्र राम्रो कामको थालनी गर्न सकियो भने पनि औसत नेपालीको आयु बाँचुञ्जेल कतिवटा राम्रो काम गरिँदोरहेछ ? स्वाभाविक उत्तर छ, मानिस–मानिस भएर नै बाँच्न सकिँदोरहेछ । प्रतिष्ठित नागरिक भएर बाँच्न सकिने हुँदोरहेछ ।
पछिल्लो पुस्ता नै नयाँ वर्ष मनाउने होडमा अगाडि देखिन्छ । इन्टरनेटको सजिलो पहुँचले गर्दा पछिल्ला पुस्ताका हरेक क्रियाकलापमा अनावश्यक परिवर्तनहरु बढेर गइरहेका छन् । देशको वर्तमान अवस्थाबाट नयाँ पुस्ताले केही कुरा सोच्न बाध्य हुनुपर्ने देखिन्छ । देशमा युवाको संख्या नै अरुको तुलनामा अधिक नै छ । देशको धेरै जनसंख्या ओगटेर रहेको युवापुस्ता लहलहैमा लागिराख्ने र समय कटेपछि परदेश ताक्ने यही परम्परा कायम रहिरहने हो भने फेरि यो नयाँ वर्ष २०७१ पनि अघिल्ला नयाँ वर्षहरुझैँ आएको मानिन्छ, अनि पहिलाका वर्षहरुझैँ जान्छ र फेरि अर्को नयाँ वर्ष २०७२ हुँदै अरु थुप्रै नयाँ वर्षहरु आउँदै–जाँदै गर्छन् । अनि, हामीले पनि पहिले र अहिलेझैँ नयाँ वर्षले नयाँ जोश, जाँगर ल्याओस् र हार्दिक मंगलमय शुभकामना भन्दै शुभकामनाका सन्देशहरु पठाइरहेका हुनेछौँ ।
नयाँ वर्षको अवसरमा अब शुभकामनाका सन्देशभन्दा पनि आफूले गर्ने नयाँ कामको प्रतिबद्धता साथीहरुको मोबाइल र फेसबुक पेजमा पढाउने नयाँ चलनको विकास गर्न आवश्यक छ । देशका लागि केही गर्नेछु भनेर शपथ खाने दिनका रुपमा पनि नयाँ वर्षलाई विकास गर्न आवश्यक छ । नयाँ वर्षको पहिलो एक दिनमा मात्र उल्लेख्य केही गर्न सकिएको हुँदैन । त्यस खास दिन नयाँ कामको संकल्प गर्ने र बाँकी दिन त्यही संकल्पलाई पूरा गर्ने दिनका रुपमा प्रत्येक एक वर्षलाई विकास गर्न सकेमा मात्र व्यक्तिगत आचरणमा सुधार र व्यावहारिक जीवनमा सफल बन्न सकिन्छ । अब नयाँ वर्ष भन्दै शुभकामनाको प्रचारप्रसारमा कुद्नभन्दा नयाँ कामको तालिका वा व्यक्तिगत आचरणमा रहेका कमीकमजोरीमा सुधार गर्नतर्फ पो लाग्ने कि ?
नयाँ वर्षको आगमनदेखि नै प्रत्येक महिनाको अन्त्यमा प्रत्येक दिनको समीक्षा गर्दै जाने बानी बसाल्न सकेमा पनि जीवन सफल तरिकाले जिउन सकिने हुन्छ । नयाँ वर्षका प्रत्येक दिनदेखि दैनिक एक–एकवटा शब्दको अर्थ खोजियो भने वर्ष बित्दा तीन सय पैँसट्ठी शब्द दिमागमा भण्डारण गर्न सकिन्छ । त्यसले पनि राम्रै फाइदा पुगेको हुन्छ जीवन जिउनलाई । सके दैनिक नसके पनि मासिक तालिका बनाएर मन लागेको विधालाई तालिकामा पारियो भने त्यसबाट पनि छिट्टै प्रगति गर्न सकिन्छ ।
यसै नयाँ वर्षदेखि तपाईं मासिक रुपमा आफूले गरेका कामको समीक्षा गर्ने बानी बसाल्नुभयो मात्र भने पनि तपाईं अरु धेरै मानिसभन्दा केही भिन्न र आकर्षक व्यत्तित्व बनाउन सक्नुहुने छ । मानिसकोे यस खालको चरित्रसँग एउटा शक्ति पनि जोडिएर आएको हुन्छ । समीक्षामा तपाईं आपूm कति सफल, कति असफल ? कति विजयी, कति पराजयी ? स्वयं मूल्यांकन गर्नुहुने छ र त्यसपछि असफल र पराजयको कारण खोजी गरी सुधार गर्न तत्परता देखाउनुहुने छ । मानिसमा आफूलाई नलागेसम्म कसैले भनिदिएको भरमा परिवर्तन हुँदैन । तर, जब मानिस उसैलाई महसुस हुन्छ, तब मानिस सुधारिन समय लाग्दैन । मानिसले आफ्नो जीवनका बारेमा पैmसला दिन कुनै खास दिन नै कुर्नुपर्ने त होइन, तर नयाँ काम नयाँ दिनमा गर्दा सधैँका लागि सम्झन भने पक्कै पनि सजिलो हुन सक्छ । नयाँ वर्षसँगै धेरै जिम्मेवारी पनि सँगै आइरहेका हुन्छन् । त्यसलाई कसरी सोच्ने भन्ने सोचाइमा भर पर्छ ।
नयाँ पुस्ताका युवाहरुले पछिल्लो समयमा प्रत्येक चाड नयाँ शैलीबाट मनाउन चाहेका छन्, यो राम्रो होइन । युवापुस्ता यस्तो शैलीलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउन चाहन्छन्, जसको नतिजा राम्रो नहुन सक्छ । यो कुरा समयमै सोच्न आवश्यक छ । युवाहरुको यो शैलीप्रति थोरै मानिस मात्र बेखबर छन् । मानिसहरु चाड मनाउनकै लागि एक्लै घरबाट बाहिर टाढा निक्लने कुरा पनि राम्रो मान्न सकिँदैन ।